ထိုင်ဝမ်ကော်ဖီစေ့ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ ထိုင်ဝမ်ကော်ဖီစေ့ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်, NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည် ထိုင်ဝမ်ကော်ဖီစေ့သင်ပြဿနာများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်များနိမ့်ကျအရည်အသွေးကစိတ်ပျက်နေကြသည် .If ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်စွာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရုတ်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယနေ့ကမ္ဘာနှင့်အနာဂတ်! သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ် e-mail ကိုပို့ပေးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အထံမှနား ထောင်. ဒါကြောင့်သင့်အား reply ရန်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။
ပုံစံ - 1-1
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Alishan ကော်ဖီဥယျာဉ်၌စိုက်
ထိုင်ဝမ်’s Chiayi Alishan Alpine ကော်ဖီ,1 အမြင့်မှာစိုက်ပျိုး,မီတာ 000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို,အဝတ်လျှော်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်
Alishan ကော်ဖီတွင်ချဉ်သောအရသာရှိပြီးလန်းဆန်း။ သန့်ရှင်းသောအရသာရှိသည်.Alishan ကော်ဖီမှာသကြားမပါဘဲမွှေးသောအရသာရှိသည်,နှင့်အရသာချိုမြိန်ချောမွေ့သည်.
Alishan Alpine ကော်ဖီသည် Alishan Mountains တွင်အမြင့်မီတာ ၁၀၀၀ ကျော်တွင်ထုတ်လုပ်သည်.မဟာအလီတောင်တန်းများရှိလေသည်သန့်ရှင်းသည်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,နှင့်ရာသီဥတုစိုစွတ်သည်.တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းတယ်.Alishan ၏အထူးရာသီဥတုကြောင့်,လက်ဖက်ခြောက်ကိုနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးသည်သာမက,ဒါပေမယ့်လည်းရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာကိုလည်းကော်ဖီ၏ကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်.Alishan ကော်ဖီတွင်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်,ခါးသီးခြင်း၊,နှင့်အတော်လေးချောမွေ့သည်.လှူသောသူ&တောင်ကြီးမြို့;t ကော်ဖီအနက်ရောင်ကိုသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်တယ်.အခြားကော်ဖီများနှင့်မတူသည်,ဒါဟာသကြားမပါဘဲဆေးဝါးသောက်သုံးနှင့်တူ၏. .
ထိုင်ဝမ်နှင့်ဂျမေကာတွင်ကျွန်းတစ်မျိုးတည်းရာသီဥတုရှိသည်.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ၏လတ္တီတွဒ်သည်မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ဒီဂရီနှင့်ဂျမေကာအပြာရောင်တောင်တန်းများ၏မြောက်လတ္တီတွဒ်သည် ၁၈ ဒီဂရီမြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ကော်ဖီစိုက်ပျိုးမှုသည် Jamaican Blue Mountain ကော်ဖီနှင့်နီးသည်.Alishan တောင်တန်းဒေသသည်မြူဆိုင်း။ နေသာသည်.နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားသည်,နှင့်ထုတ်လုပ်ကော်ဖီစေ့ထူးခြားတဲ့အရသာနှင့်ချစ်စရာကောင်းအနံ့ရှိသည်.
ရေစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အဘို့အအကြံပြုစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နည်းလမ်း:10 ဂရမ်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်,250CC နှင့်အတူလက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်,၈၅̊ဂ~90̊ရေပူရေ,သင်သည်မွှေးသောကော်ဖီကိုခံစားနိုင်သည်
အလေးချိန်:226 ဂရမ်&ကျော်သူ;5 ဂရမ်(တစ်ပေါင်ဝက်)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/taiwan-coffee-beans.html
အကောင်းဆုံး ထိုင်ဝမ်ကော်ဖီစေ့ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ထိုင်ဝမ်ကော်ဖီစေ့ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
Alishan ကော်ဖီစေ့ Arabica ကော်ဖီ၏ကြီးထွားမှုပတ်ဝန်းကျင်ကပိုခက်သည်.ဒီကော်ဖီပင်ကအရိပ်ကြိုက်တယ်.တစ် ဦး တည်းစိုက်လျှင်ကြီးထွားဖို့အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး,အလီတောင်တန်းများသည်သစ်တောထူထပ်စွာရှိပြီးကွမ်းပင်များစွာရှိသည်.ကော်ဖီပင်များကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်ကွမ်းပင်များကိုကွမ်းပန်းခြံတွင်စိုက်ထားသည်.၎င်းသည်နေမှအရိပ်ရနိုင်ပြီး Tibica ကော်ဖီတိုးတက်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်.ကော်ဖီပင်သည်စိုက်သည့်နေရာနှင့်မတူကွဲပြားသောအနံ့များနှင့်အရသာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်.၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ကော်ဖီကိုပြုလုပ်သည့်အလွန်တစ် ဦး ချင်းကော်ဖီအမျိုးအစားဖြစ်သည်.ထိပ်တန်းအထူးကော်ဖီတစ်လုံးဖြစ်လာသည်. ရေစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အဘို့အအကြံပြုစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နည်းလမ်း:10 ဂရမ်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်,250CC နှင့်အတူလက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်,၈၅̊ဂ~90̊ရေပူရေ,သင်သည်မွှေးသောကော်ဖီကိုခံစားနိုင်သည် Alishan ကော်ဖီစေ့အမျိုးမျိုး:Tibica(Arabica ၏ရှေးဇာတိမျိုးစိတ်)ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း:အဝတ်လျှော်မုန့်ဖုတ်ဒီဂရီ:အလတ်စားအလင်းမုန့်ဖုတ်အလေးချိန်:226 ဂရမ်&ကျော်သူ;5 ဂရမ်(တစ်ပေါင်ဝက်)မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
Alishan အထူးကော်ဖီ(filter ဆွဲထားအမျိုးအစား) ထိုင်ဝမ်နှင့်ဂျမေကာတွင်ကျွန်းတစ်မျိုးတည်းရာသီဥတုရှိသည်.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ၏လတ္တီတွဒ်သည်မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ဒီဂရီနှင့်ဂျမေကာအပြာရောင်တောင်တန်းများ၏မြောက်လတ္တီတွဒ်သည် ၁၈ ဒီဂရီမြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။.ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ကော်ဖီစိုက်ပျိုးမှုသည် Jamaican Blue Mountain ကော်ဖီနှင့်နီးသည်.၏တောင်တန်းareaရိယာ​​Alishan မြူဆိုင်းပြီးနေသာသည်.နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားသည်,နှင့်ထုတ်လုပ်ကော်ဖီစေ့ထူးခြားတဲ့အရသာနှင့်ချစ်စရာကောင်းအနံ့ရှိသည်.Arabica ကော်ဖီ၏ကြီးထွားမှုပတ်ဝန်းကျင်ကပိုခက်သည်.ဒီကော်ဖီပင်ကအရိပ်ကြိုက်တယ်.တစ် ဦး တည်းစိုက်လျှင်ကြီးထွားဖို့အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး,အလီတောင်တန်းများသည်သစ်တောထူထပ်စွာရှိပြီးကွမ်းပင်များစွာရှိသည်.ကော်ဖီပင်များကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်ကွမ်းပင်များကိုကွမ်းပန်းခြံတွင်စိုက်ထားသည်.၎င်းသည်နေမှအရိပ်ရနိုင်ပြီး Tibica ကော်ဖီတိုးတက်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်.ကော်ဖီပင်သည်စိုက်သည့်နေရာနှင့်မတူကွဲပြားသောအနံ့များနှင့်အရသာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်.၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်ရှိ Alishan ကော်ဖီကိုပြုလုပ်သည့်အလွန်တစ် ဦး ချင်းကော်ဖီအမျိုးအစားဖြစ်သည်.ထိပ်တန်းအထူးကော်ဖီတစ်လုံးဖြစ်လာသည်. အမျိုးမျိုး:Tibica(Arabica ၏ရှေးဇာတိမျိုးစိတ်) ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း:အဝတ်လျှော်ခြင်း(အဝတ်လျှော်သည့်နည်းသည်မြင့်မားသောအရသာနှင့်မူရင်းအရသာကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သည်-အနံ့မပါဘဲအရည်အသွေးမြင့်ကော်ဖီစေ့) မုန့်ဖုတ်ဒီဂရီ:အလတ်စားအလင်းမုန့်ဖုတ် စွမ်းရည်:10 gx 15 အိတ်/သတျတော သိုလှောင်ချိန်:တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
Alishan အထူးကော်ဖီ(filter ဆွဲထားအမျိုးအစား) ကိုယ်ပိုင် Alishan ကော်ဖီဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း ထိုင်ဝမ်ရှိ Greater Alishan ခရိုင်မှတင်းကြပ်စွာရွေးချယ်ထားသောကော်ဖီစေ့ အသေးစားလယ်သမားကော်ဖီ နှစ်လယ်-မီးကင်,ကော်ဖီ chlorogenic အက်ဆစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် သင်နှင့်အတူထုပ်ပိုးပြီးအချိန်မရွေးပျော်မွေ့ပါ Alishan Alpine ကော်ဖီသည် Alishan Mountains တွင်အမြင့်မီတာ ၁၀၀၀ ကျော်တွင်ထုတ်လုပ်သည်.မဟာအလီတောင်တန်းများရှိလေသည်သန့်ရှင်းသည်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,နှင့်ရာသီဥတုစိုစွတ်သည်.တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းတယ်.Alishan ၏အထူးရာသီဥတုကြောင့်,လက်ဖက်ခြောက်ကိုနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးသည်သာမက,ဒါပေမယ့်လည်းရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာကိုလည်းကော်ဖီ၏ကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်.Alishan ကော်ဖီတွင်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်,ခါးသီးခြင်း၊,နှင့်အတော်လေးချောမွေ့သည်.လှူသောသူ&တောင်ကြီးမြို့;t ကော်ဖီအနက်ရောင်ကိုသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်တယ်.အခြားကော်ဖီများနှင့်မတူသည်,ဒါဟာသကြားမပါဘဲဆေးဝါးသောက်သုံးနှင့်တူ၏. . အမျိုးမျိုး:Tibica(Arabica ၏ရှေးဇာတိမျိုးစိတ်) ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း:အဝတ်လျှော်ခြင်း(အဝတ်လျှော်သည့်နည်းသည်မြင့်မားသောအရသာနှင့်မူရင်းအရသာကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သည်-အနံ့မပါဘဲအရည်အသွေးမြင့်ကော်ဖီစေ့) မုန့်ဖုတ်ဒီဂရီ:အလတ်စားအလင်းမုန့်ဖုတ် စွမ်းရည်:10 gx 15 အိတ်/သတျတော သိုလှောင်ချိန်:တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်